China Auto EPP / ETPU / EPO igwe Manufacturers na Suppliers | Welleps
EPP udi ịkpụzi igwe
Solid ígwè ewu esichara site na elu okpomọkụ annealing, okpomọkụ ọgwụgwọ, n'elu de-ajụrụ site sandblast na sprayed site mgbochi corrosive agba.
Control usoro adopts Japan PLC na English ihuenyo mmetụ maka mfe ọrụ na n'ụzọ zuru ezu akpaka amị.
Ngwa igwe dị elu ma kwụsie ike, dịka German Burkert angle-oche valves.
Energy ịzọpụta site ọma-e igwe size, anwụrụ edoghi na-aghọta ngwa ngwa uzuoku mgbali amụba na-agbada.
Nnukwu mmiri na-agba ọsọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche, nke na-eme ka igwe na-agba ọsọ ma na-agbachichi.
Enwere ike ịkwadebe igwe ahụ yana sistemu agụụ, yana enwekwa ohere ịnweta usoro agụụ agụụ nke etiti.
Ugboro abụọ na-eri nri maka nri ngwa ngwa iji belata oge okirikiri.
Iguzozi valvụ maka anụ uzuoku ịchịkwa.
Extended zinc ntekwasa igwe ụkwụ bụ ịnara maka ndị ahịa maka ịwụnye igwe na ala pụrụ iche.
Igwe akụrụngwa na ikpo okwu bụ nhọrọ.
EPP (Polypropylene gbasaa) 即 高 发泡 聚丙烯 型 型 聚合物 / 气体 材料 ， 以其 独特 独特 独特 而 优越 优越 目前 增长 增长 最快 最快
能量 吸收 ： 由于 EPP 制品 具有 特殊 的 泡 的 结构 ， 通过
EPP (andbawanye Polypropylene) bụ ụdị nke nnukwu arụmọrụ kristaline polymer / gas mejupụtara ihe, ya na arụmọrụ ya kachasị mma iji ghọọ ngwa ngwa gburugburu ebe obibi na ngwa mkpuchi.
Mmetụta ike: n'ihi na ngwaahịa EPP nwere ụdị ngwongwo afụ pụrụ iche, ọ nwere ike ịmịkọrọ ume site na mpụga nke ọma, ma nwee ike imegide pịa nke ọma.
Nweghachi: EPP ngwaahịa dị mma mgbanwe nwere ike ji mee ihe ugboro ugboro, anaghị adị mfe gbajie.
EPP 制品 的 应用 领域 广泛 主要 主要 应用于 汽车工业汽车 侧面 保险杠
EPP ngwaahịa ọtụtụ-eji ụgbọala ụlọ ọrụ, dị ka ụgbọ bompa, ụgbọ ala n'akụkụ shockproof isi, ọnụ ụzọ, elu nchekwa ụgbọ ala oche, wdg
Isi ọrụ nke igwe a
Iji nweta ngwaahịa dị iche iche dị iche iche, igwe ọrụ a nwere ọtụtụ ọkwa ebu, min, akụkụ dị gburugburu 600 × 800 mm na max. Dimension ruru 1200 × 1400 mm. Nke a igwe na-onwem na abụọ-nzọụkwụ haịdrọlik usoro, abịakọrọ nri usoro, na Central ume usoro, enyemaka damper, na-ejide-mgbali mmiri tank, odide usoro, kọmputa na-achịkwa usoro, digital usoro akara usoro na uzuoku ụlọ.
AKW MACKWỌ AKW MACKWỌ
Usoro a anaghị achọ mmanu ọ bụla. A na-etinye silinda hydraulic ahụ n'akụkụ abụọ nke mbibi ahụ na ọbụna ike ịmịkọ ike. Igwe anaghị agba agba nwere ike ijide ọkụ. A na - ejikwa sistemu kọmpụta jikwaa ebu ma mezie ihe na - akpụzi ebu nke ga - eme ka ị nweta nri kacha mma. The ebu ejection ngagharị na-achịkwa ejection usoro inye nke kacha mma mma nke nkenke ngwaahịa n'oge ejection usoro.
NTAYR OF AKW OFKWỌ A
Emere igwe a dika uzo uzo ato. Ihe a na-emeghe oghere ga-eme ka usoro a na-agbanwe agbanwe na ndị ọrụ nwere ike ịgbanwe ebu site na ihu, azụ na akụkụ abụọ nke igwe a. Ọzọkwa, a pụrụ itinye igwe a ozugbo na ala na-enweghị ịtọ ntọala ọ bụla. Iji chebe nchekwa nke ndị ọrụ, akụrụngwa a nwere ọnụ ụzọ nchekwa na usoro nchekwa.
Nke a na ebu na-atọ-mpempe akwụkwọ efere format. Enwere ike idozi ike karịa na-enweghị mbibi, yabụ enwere ike iji ya mee ihe. The ndu atụdo na ịgba egbe na-arụnyere n'ime ebu akpụ akpụ efere iji hụ na nchekwa nke ọrụ. Iji belata oge arụsị, usoro ihe a na-enye ngwa ngwa ebu na ịgbanwe usoro.
Sistemụ hydraulic nke abụọ na-enye nhọrọ ọsọ abụọ (ọsọ ọsọ na nwayọ) maka ebu-mmechi na mmeghe. Ọzọkwa, oge nhazi ahụ belatara.
Igwe a nwere otu usoro zuru oke nke usoro ume ike nke ụlọ ọrụ anyị na-ewepụta niile uzuoku na ikuku nke achọrọ n'oge usoro ogwu ahụ na-achịkwa valvụ ike ume. Usoro a ga - enye obara ikuku ma enwere ike gbanwee ya. A na-eme usoro uzuoku a na-eme ka ọkpọkọ na valvụ gbasaa nke nwere ike inye ọnọdụ kachasị mma.
AKW PRKWỌ Mgbasa Ozi Mgbasa
Ngbanwe nke nrụgide ike dị ezigbo mkpa. N'okpuru nrụgide uzuoku dị elu, oge mmepụta ga-adị ogologo ma na-eri ike karịa. Agbanyeghị, ngwaahịa ikpeazụ nwere ike bụrụ ihe arụ ọrụ nwere ike imetụta ọdịdị nke ngwaahịa ahụ mgbe nrụgide ahụ dị obere. Ihe enyemaka ahụ na-arụ ọrụ mgbe ị na-ahapụ ebu ma kpoo ebu ahụ. A na-eji ikuku na-eme ihe emejuputa iji jupụta na nke a na-egbochi ga-ebelata ike nke ume ma nye ngwaahịa dị elu.
AKWINGKWỌ ND WAT MMAD PR NA-EME
Ejiri igwe nwere otu mmiri na-ejide mmiri hank nke nwere ntinye abụọ dị iche iche maka mmiri jụrụ oyi na condensate.
A na-eji usoro agụụ nwere ihe mgbapụta nke Liquid Ring Vacuum na condenser nke na-enye ohere dịkwuo mkpa karị. Enweghị ihe ọ bụla ihicha nzọụkwụ, anyị nwere ike adị n'elu ogwu n'okpuru a agụụ usoro. The ebu ejection dị mfe ga-agwụ agwụ na-azọpụta ndị ọzọ ume.
PLỌ KỌPUTA ECHICHE
Igwe ogwu ogwu a nwere sistemụ njikwa kọmputa nke nwere ọrụ nke onye editọ na mmụba. usoro ọ bụla nke ịrụ ọrụ bụ nke a na-achịkwa site na nchọpụta njehie kọmputa a na ihe ngosi na-egosipụta na ihuenyo A na-etinye ụdị ihe atụ ọ bụla na sistemụ compute a nke gosipụtara usoro, nhazi oge na ihe kachasị mkpa na-achịkwa nrụgide ga-edozi nrụgide ahụ.
Anyị nwere ike chepụta igwe dị ka ndị ahịa zuru ezu chọrọ.
Nke gara aga: Auto Shape Nkedo Machine na agụụ
Osote: EPP (Gbasaa Polypropylene)